काठमाडौं। नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले चीन र भारतबाट नेपालमा उच्चस्तरको भ्रमण हुनु राम्रो र सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने, ‘हामी नेपालीहरू धेरै भाग्यशाली छौं, यो अर्थमा कि अहिले हाम्रा दुई वटै छिमेक एउटा सुपर पावर भईनैसक्यो। अर्को सुपर पावर हुन गइराखेको छ। दुईवटैको अर्थतन्त्र कोरोनाले बाहेक, धेरै फड्को मारेका छन्। हामीले अलिकति बुद्धि लगाउन सक्यौं, आन्तरिक झैँ-झगडा छोडेर लिनुपर्छ। हामी धेरै माथि जान सक्छौँ।’
डा. दीक्षितले नेपालका नेताहरूले आफ्नो हितलाई मात्रै हेर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘चीन र भारतलाई लडाएर, एक आपसमा झगडा लगाएर आफ्नो राजनीतिलाई मात्रै पाइँदाको रूपमा हेर्नुहुँदैन। हामीसँग धेरै साधन छैन। प्रगतिको लागि हामीले भारत र चीनसँग त सहकार्य गर्नुपर्छ। भारतबाट धेरै सहयोग पाएका छौँ। चीनले पनि बिआरआईमार्फत सहयोग दिन खोज्दै छ। यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो।’
डा. दीक्षितले नेपालका नेता तथा सबै दलहरूले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार आफ्नो विदेश सम्बन्ध राख्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘अहिले टप नेताहरू दुवै तिरबाट नेपाल आएका छन्। चिनियाँ रक्षामन्त्री ८ घण्टाको लागि मात्रै आउनुभएको छ। उहाँ मलाई लाग्छ, केही ठोस कार्य गर्न आएको होला भारतका गुप्तचर विभाग रअ प्रमुख आए। त्यसैगरि विदेश सचिव आए। असाध्यै राम्रो तहमा हामी गाएका छौँ। एउटालाई खुसी पार्न अर्कोलाई खत्तम गर्‍यौँ भने राम्रो हुँदैन। तर, अहिले भइरहेको छ।’
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको उनको दाबी छ। डा. दीक्षितले भने, ‘ओली आएपछि कहिल्यै नबढेको भारतसँगको हाम्रो शत्रुता बढ्यो। नेपालको भारतसँग यस्तो खराब सम्बन्ध कहिल्यै पनि थिएन। अहिले आएर अलिकति सुल्झाउन ओलीले पनि खोजे। भारतले पनि त्यसलाई टेवा दिएको छ। हेल्प गरेको छ। चीनसँग राम्रो देखाउन, मित्रता देखाउन भारतसँग सम्बन्ध बिगार्नुहुँदैन। नेपालले हिजो पनि यो खेल खेलेको हो। एकविरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्ने काम गर्नुहुँदैन।’
नेपाल भ्रमणको क्रममा चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपाललाई सैनिक सहयोग दिन्छु भनेर गरेको घोषणालाई उनले प्रश्न गरे, ‘तर, हामीलाई सैनिक सहयोग चाहिएको छ कि छैन ? यो हामीले सोच्ने कुरा हो। अहिले किन हातहतियार चाहियो ? अहिले किन गरेको हो ? अहिले त आर्थिक उत्थानको कुरा ठूलो हो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी कसरी प्रभावकारी हुने ? यो कुरा प्रधान हो।’